Seborrheic Keratosis or Keratosis pilaris ဆားဝက်ခြံ - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
၁။ ကျွန်မအသက်က ၂၇ ပါဆရာ။ ကျန်းမာရေးလဲကောင်းပါတယ်ဆရာ။ အိမ်ထောင်လဲရှိပါတယ်။ ကျွန်မ အသက် ၁၅ နစ်လောက်ကစပြီး မျက်လုံးအောက်မာ ဝက်ခြံလိုအဖုသေးသေးလေးတွေပေါက်လာပါတယ်။ ဝက်ခြံလိုလဲညှစ်လို့ မရပါဘူးဆရာ။ အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ အဖုလေးတွေ ပိုပိုများလာလို့ပါဆရာ။ ဘာဆေးသုံးရမလဲ ညွှန်ပြပေးပါအုန်းဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
၂။ ဆရာ သမီးမျက်မှာ နှာခေါင်းဘေး မျက်လုံးအောက်မှာ ဗျုတ်ကလေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ အဖုလေးတွေ အများကြီးပါ။ မနက်အိပ်ယာနိုးချိန်မှာ မသိသာပေမဲ့ နေ့လည်ကစပြီး အရမ်း သိသာပါတယ်။ အဲဒီ အဖုလေးတွေကို ကုလို့ရနိုင်ပါလား။ တချို့က အဲဒါကို ဆားဝက်ခြံလို့ပြောပြီး၊ တချို့က အဆီဖုလို့ ပြောပါတယ်။ မျက်နှာအရေပြား ချောချင်ပါတယ်။ ကုလို့ရနိုင်ပါလားဆရာ။ ဖြေကြားပေးပါ။
၃။ ဆရာ ကျွန်တော့ မျက်နှာ ပါးနှစ်ဖက်မှာ ဝက်ခြံတွေထွက်နေတာကြာပါပြီ။ ဝက်ခြံဆိုပေမဲ့ ရိုးရိုးဝက်ခြံလိုမျိုး ရောင်တာ မှဲ့တာ နာတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ ဆားဝက်ခြံလို့ပဲ ခေါ်မယ်ထင်တယ်။ မျက်နှာပေါ်မှာ စမ်းကြည့်ရင် အစေ့လေးတွေလိုမျိုးပဲ။ မှဲ့ပြီးတော့လဲ ရောင်မလာဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ။ ညှစ်လိုက်မှ အဖြူအစံလေးတွေ ထွက်လာပါတယ်။ မညှစ်ရင် ဒီအတိုင်းကြီးပဲ ကျန်နေပါတယ်။ မျက်နှာကလဲ ကိုင်လိုက်ရင် အခဲလိုမျိုးကြီးပဲ။ ကျွန်တော်မျက်နှာသစ်ရင် သေချာသစ်ပါတယ်။ လက်နဲ့လဲ မကိုင်ပါဘူး။ Cosmetic တွေသုံးပေမဲ့ အဆင်မပြေပါဘူး။ အဲ့ဒါဘယ်လို ပျောက်အောင်လုပ်ရမလဲ အကြံပေးပါဦးဆရာ။ ပြီးတော့ ဘာလို့ အလိုမျိုး ဖြစ်တာရယ် ရိုးရိုးဝက်ခြံနဲ့ ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတာ ရှင်းပြစေလိုပါတယ်။
အရေပြားမှာ ဖြစ်တာတွေက အတော်ကို များလှတယ်။ မျက်မြင်မဟုတ်ဘဲ မှန်းရတာ သိပ်တော့ မကောင်းဘူး။ သေခြာ ကြည့်တာတောင် ခွဲခြားရတာ ခက်သေးတယ်။ မေးတဲ့စာထဲကအတိုင်း ဝက်ခြံနဲ့ ဆင်တယ်ဆိုရင် အနီးစပ်ဆုံးက Seborrheic Keratosis ဒါမှမဟုတ် Keratosis pilaris acne-like bumps ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပဌမဟာက မျက်နှာမှာ၊ နောက်ဟာက လက်ဖျံ၊ ပေါင်နဲ့ တင်ပါးမှာ ဖြစ်တယ်။
Seborrheic Keratosis ဆားဝက်ခြံ
အလုံး-အကျိတ်-အနာအဆာ တခုခုတွေ့ရင် ပဌမဆုံး ခွဲခြားရမှာက ကင်ဆာလား၊ ကင်ဆာမဟုတ်တာလား ဖြစ်ပါတယ်။ Seborrheic Keratosis ဆားဝက်ခြံက ကင်ဆာ မဟုတ်ပါ။ Acne ဝက်ခြံနဲ့ ဆင်တယ်။ မျက်နှာမှာ အများဆုံး ဖြစ်တယ်။ စုံးမကြီး မျက်နှာမှာ ရုပ်ဆိုးအောင် အဖုအလုံးတွေ လုပ်ပေးထားတာ ဒါမျိုးပါဘဲ။ ဒီအဖုလေးတွေက တခုခု လာကပ်နေသလို ကြည့်တဲ့လူက လက်နဲ့ ဖယ်ထုတ်ချင်စရာ ကောင်းလှတယ်။ အရေပြားရဲ့ အပေါ်ဆုံးလွှာ Epidermis ကနေ ဖြစ်လာတာပါ။ ကြွက်နို့လို အရေပြားအတွင်းထဲ မရောက်ဘူး။ နဲနဲကြမ်းတာနဲ့ မကြမ်းတာမျိုးရှိတယ်။ မကြမ်းရင် အစေ့လေးတွေ လာကပ်နေသလို ဘေးက အရေပြား အကောင်းထက် နဲနဲ အရောင်ရင့်နေမယ်။ မှန်ဘီလူးနဲ့ ကြည့်ရင် ပုလဲလုံးလေးတွေလိုနေတယ်။ တခါတခါ ယားတယ်။ ကြာလာရင်ပေါ့။ ဆွရင်-ဆိတ်ရင် ရဲလာလိမ့်မယ်။ များသွားရင်တော့ သွေးထွက်မှာပေါ့။
အသက်အရွယ် လူလတ်ပိုင်းမှာများတယ်။ မိသားစုထဲမှာ တယောက်မကဖြစ်တတ်တယ်။ တချို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှ ဖြစ်လာတယ်။ တချို့ ဟော်မုန်းကုသမှုရနေတုံးမှာဖြစ်တယ်။ ဘာလို့လည်း မပြောနိုင်သေးပါ။ ဟော်မုန်းကနေဖြစ်ဘို့ များတယ်။ နေရောင်ထိတာကြောင့်လား စဉ်းစားတယ်။ မကူးစက်ပါ။
ဘာလုပ်ရမလဲ။ ဒီအတိုင်းသာထားပါ။ နဲနဲကြီးလာချင်လာမယ်။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ လှချင်လို့ ရှင်းချင်ရင် Liquid Nitrogen ဆိုတဲ့ အရည်နဲ့ အေးခဲအောင်လုပ်ပေးတယ်။ မီးလောင်ဖုလိုမျိုး အရည်ကြည်ဖုလေးတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ပြီးမှ နဲနဲကြာမှ အနာကျက်လာမယ်။ အနာဖြစ်ရင် အနာရွတ်ကြီးတတ်သူများ မျက်နှာမှာဆို ဒါမျိုးမလုပ်သင့်ဘူး။ တချို့လူတွေမှာ ဘာအနာဖြစ်ဖြစ် Keloids အနာရွက်သီး ဖြစ်တတ်တယ်။
နောက်တနည်းက ရိတ်ပြစ်တာ။ Flexible razor blade သုံးသင့်တယ်။ လက်မလွန်စေနဲ့။ ရိတ်ပြီးရင် Aluminum chloride or Silver nitrate ဆေးလိမ်းပေးပါ။ သွေးမထွက်စေဘူး။ Silver nitrate ကညိုမဲမဲမို့ အစမှာ ညိုနေအုံးမယ်။ နောက် ပျောက်သွားမယ်။ Aluminum chloride ကပိုကောင်းတယ်ပေါ့။ Light electrocautery လျှပ်စစ်နဲ့ လောင်စေတဲ့နည်းလည်း သုံးပါတယ်။
Keratosis pilaris ဝက်ခြံတမျိုး
မျက်နှာမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နီ-ဖြူ၊ မနာ-မယားဘူး။ ကြမ်းနေတယ်။ ကုရတာခက်လို့ စိတ်ပျက်စေနိုင်တယ်။ မဆိုးတာက ဘာမှ တခြားဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူး။ ငယ်သူတွေမှာ ဖြစ်တာများပြီး အသက် ၃ဝ လောက်မှာ ပျောက်သွားတယ်။ မျက်နှာမှာ ဖြစ်လို့ ပျောက်ရင် အမာရွတ်ကျန်တတ်တယ်။ ဆိုလိုတာက သု့ဖါသာလည်း ပျောက်ပါတယ်။ ဆေးတမျိုးနဲ့ မရတတ်ဘူး။ ကိုယ့်ဖါသာ ဂရူစိုက်တာ လုပ်ရမယ်။
Topical exfoliants (alpha-hydroxy, lactic or salicylic acid or urea) ပါတဲ့လိမ်းဆေး၊ Topical corticosteroids စတီရွိုက် ပါတဲ့ လိမ်းဆေး၊ Topical retinoids (vitamin A) ပါတဲ့လိမ်းဆေး၊ Tretinoin (Retin-A Micro, Avita) and tazarotene (Tazorac) သုံးနိုင်တယ်။
• အရေပြားကို ညင်ညင်သာသာ ကိုင်တွယ်ယုယပါ။
• မျက်နှာသစ်၊ ရေချိုးပြီးတိုင်း အသာအယာ ခြောက်သွေ့ပေးပါ။
• ရေချိုးပြီးရင် ရေငွေ့ဓါတ်ပေးတဲ့လိမ်းဆေးသုံးပါ။
• လက်တစ်အက်စစ်ပါတဲ့လိမ်းဆေး၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်လိမ်းပါ။
• အိမ်မှာ ရေငွေ့ဓါတ်ပေးတဲ့ ကရိယာတပ်ဆင်ပါ။
• အရေပြားကို Eucerin and Cetaphil လိုဆေးနဲ့ ရေငွေ့ပေးပါ။
• ရေချိုးရင် အချိန်များများပေးပါ၊ ရေနွေး (ရေပူမဟုတ်) နဲ့ချိုးပါ။
• ဆပ်ပြာကို အပြင်စားတွေမသုံးပါနဲ့။ ဆီ-အဆီပါတဲ့ Neutrogena, Basis or Dove ဆပ်ပြာတွေ ဖြစ်တယ်။ Deodorant and antibacterial detergents တွေရှောင်ပါ။ ကြော်ညာကောင်းတဲ့ လိမ်းဆေး၊ ဆပ်ပြာတွေ သတိထားပါ။ အရေပြားကို နူးညံ့၊ သန့်ရှင်းနေဘို့နဲ့ ခြောက်သွေ့ မနေစေဘို့ ဖြစ်တယ်။
• အရေပြားကို ရေချိုး၊ မျက်နှာသစ်ပြီးရင် မျက်နှာသုတ်ပုဝါနဲ့ ပွတ်တိုက်ချသလို မဖြစ်စေဘဲ၊ အောက်ဖက်ကို ဖိ-တို့ သုတ်တာမျိုး လုပ်ပါ။ ရုပ်ရှင်မင်းသမီများ လုပ်သလိုပေါ့။
Seborrhoea (Seborrhea) အရေပြားမျာ အဆီများရာကနေဖြစ်တယ်။ ယောက်ျား၊ မိန်းမ ဖြစ်တယ်။ အများစဟြာ အခြခံရောဂါမရှိကြပါ။ ရှားရှားပါးပါး Parkinson's disease ဒါမှမဟုတ် Acromegaly ရောဂါရှိတတ်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ Androgens ဟော်မုန်းများနေရင်လည်း ဖြစ်တယ်။ Congenital adrenal hyperplasia ဆိုတဲ့ မွေးရာပါရောဂါက အတော်ကိုရှားတယ်။ အရေပြားမှာ အနေရခက်လာမယ်။ ညစ်ပေလွယ်မယ်။ Acne ဝက်ခြံကနေဖြစ်ဖြစ် Seborrhoeic dermatitis အဆီပြန်အရေပြားနာကနေဖြစ်ဖြစ်လည်း ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
1. တနေ့မှာ မျက်နှာနှစ်ခါသစ်ပေးပါ။
2. Topical retinoids ဆေးလိမ်းနိုင်တယ်။
3. Antiandrogens အမျိုးသမီးတွေကို ဟော်မုန်းပေးနိုင်တယ်။
4. Isotretinoin သိပ်ဆိုးနေသူတွေကို ဒီဆေးပေးနိုင်တယ်။
၁။ Topical retinoids လိမ်းဆေး Creams ခရင်။ Lotions ဆေးရည် နဲ့ Gels ဂျဲလ်တွေအနေနဲ့လာတယ်။ ဆေးဟာ Vitamin A ဗီတာမင် (အေ) ကနေထုတ်ာဖြစ်တယ်။ ReTrieve™ cream (tretinoin), Retin-A™ Cream (tretinoin or retinoic acid), Retinova™ Cream (tretinoin emollient), Isotrex™ Gel (isotretinoin) နဲ့ Differin™ Gel, Cream (adapalene) တွေဖြစ်တယ်။ Adapalene ဆေးဟာ benzoyl peroxide နဲ့ရောထားပြီး Epiduo gel အနေနဲ့ရောင်းတယ်။ ဝက်ခြံဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်နတာအတွက်လည်း ဒီဆေးမျိုးသုံးတယ်။ ဆေးစွမ်းရအောင် ၄-၆ ပါတ်ကြာသုံးရတယ်။
၂။ Hormonal regimes ဟော်မုန်းဆိုတာမှာ Oral contraceptive ကိုယ်ဝန်တားဆေးပေးတယ်။ Ethinylestrodiol (Oestrogen) နဲ့ Progesterone ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးပါ၊ အများဆုံးသုံးတဲ့ဆေးမျိုးကိုသာ သုံးရမယ်။
၃။ Isotretinoin (13-cis retinoic acid) ဆေးကလည်း ဝက်ခြံမှာထိရောက်တယ်။
• Spironolactone 25-200 mg daily ဆီးသွားစေတဲ့ဆေးကို အသက် ၃ဝ ကျော်အမျိုးသမီးတွေကို ပေးနိုင်တယ်။
• Prednisone 2.5 mg မနက်တလုံး +5mg ညတလုံး) စတီရွိုက်ဆေး နည်းနည်းပေးနည်းကိုလည်း သုံးနိုင်တယ်။
• Cyproterone acetate 50 to 200 mg ဆေးကိုလည်း ဆရာဝန်ကညွှန်ရင်သုံးနိုင်တယ်။